कोरोनाविरुद्ध लड्न डाक्टरको नेतृत्वमा ‘कमाण्ड टिम’ शनिवार, बैशाख १३, २०७७
लुकीछिपी नेपाल आउने बढेपछि सिरहा-सप्तरी सिल ! शुक्रवार, बैशाख १२, २०७७
सप्तरीका दुई जनाको पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ बुधवार, बैशाख ३, २०७७
स्थानीयले लकडाउन उल्लंघन गरेपछि प्रहरीको हवाई फायर झडपका क्रममा प्रहरीले २३ राउण्ड हवाई फायर गरेको छ । अहिले पनि तनाव कायमै रहेको सिराहाका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले जानकारी दिएका छन् । सोमवार, बैशाख १, २०७७
लकडाउन उल्लंघन गर्दै हुनुहुन्छ ? जरिवाना तिर्नुपर्ला ! लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई प्रकृति हेरेर कम्तीमा ६ महिनासम्म जेल र ६ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्छ । तर अहिलेसम्म लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गरिएपनि जरिवाना तिराइएको थिएन । धनुषामा भने पहिलोपटक जरिवाना तिराइएको हो । बिहिवार, चैत्र १३, २०७६
युवकलाई लाठी हान्ने प्रहरी हवलदारलाई कारबाही इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डिएसपी धर्मराज भण्डारीले युवकलाई लाठी हानेर घर फर्काउने दुबै जना प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुने बताए । विभागीय कारबाहीका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको भन्दै डिएसपी भण्डारीले ती युवकलाई पटक पटक सम्झाई बुझाई गरेर पठाएपनि फेरि आएपछि लाठी हानिएको जवाफ दिएका छन । तर त्यो जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले विभागीय कारबाही गरिने भण्डारीले बताए । बुधवार, चैत्र १२, २०७६
विरगञ्जका ब्यापारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएन ! केही दिन यता ज्वरो तथा रुघा खोकी बढेपछि उनी उपचारका लागि पटना पुगेका थिए । पटनामा जाँचका क्रममा कोरोनाको पनि जाँच गरिएको थियो । तर त्यो जाँचको रिर्पोट नआउँदै सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो । आइतवार, चैत्र ९, २०७६